1Cor 10 | Shona | STEP | Nokuti handidi, hama dzangu, kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, vuye kuti vose vakayambuka gungwa;
Tirege kuidza Mwari savaIsraeri
1 Nokuti handidi, hama dzangu, kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, vuye kuti vose vakayambuka gungwa; 2 vose vakabhabhatidzwa munaMosesi mugore nomugungwa; 3 vose vakadya zvokudya zvimwe zomweya; 4 vose vakanwa zvokunwa padombo romweya rakavatevera; dombo iro rakanga riri Kristu. 5 Asi Mwari haana kufadzwa navazhinji vavo; nokuti vakaparadzwa murenje. 6 Zvino, zvinhu izvi zvakanga zviri zviratidzo kwatiri, kuti isu tirege kuchiva zvakaipa, sezvavakachiva ivo. 7 imi regai kunamata zvifananidzo, savamwe vavo; sezvazvakanyorwa, zvichinzi: Vanhu vakagara pasi pakudya nokunwa, vakasimuka kuti vatambe. 8 Zvino ngatirege kuita vupombwe, savamwe vavo vakaita vupombwe, vakafa nezuva rimwe venezvuru zvinamakumi maviri nezvitatu. 9 Ngatirege kuidza Kristu, savamwe vavo vakamuidza, vakaparadzwa nenyoka. 10 Murege kun’un’una savamwe vavo vakan’un’una, vakaparadzwa nomuparadzi. 11 Zvino, zvinhu izvi zvose zvakavawira, kuti vave zviratidzo; zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu, takasvikirwa nokuguma kwenyika. 12 Naizvozvo, unoti ndinomira, ngaachenjere kuti arege kuwa. 13 Hakunomuidzo wakakubatai imi, asi wavanhu vose; asi Mwari, wakatendeka, haangatenderi kuti muidzwe kupfuvura pamunogona napo; asi pamwe chete nomuidzo, iye uchakupai vo nzira yokubuda nayo, muve nesimba rokutsunga.
14 Naizvozvo, vadikanwa vangu, tizai kunamata zvifananidzo. 15 Ndinotaura sokunavakachenjera; fungai zvandinotaura. 16 Mukombe wokuvonga watinovonga, hakuzi kusongana neropa raKristu here? Chingwa chatinomedura, hakuzi kusongana nomuviri waKristu here? 17 Zvachiri chingwa chimwe chete, isu vazhinji tiri muviri mumwe; nokuti tinogovana tose pachingwa chimwe. 18 Tarirai vaIsraeri panyama; avo vanodya zvibayiro havagovani nearitari here? 19 Zvino ndotiyiko? Kuti chakabayirwa chifananidzo chinhu here? kana chifananidzo chinhu here? 20 Kwete, asi ndinoti izvo zvinobayirwa navahedheni, havazvibayirwi Mwari, asi mweya yakaipa; zvino handidi kuti muyanane nemweya yakaipa. 21 Hamunganwiri pamukombe waShe, napamukombe wemweya yakaipa; hamungadyiri patafura yaShe napatafura yemweya yakaipa. 22 Ko tinoda kumutsa godo raShe here? Tinomukunda nesimba here?
Mukristu ngaarege kugumbusa vamwe
23 Ndakatenderwa zvinhu zvose; asi zvose hazvindibatsiri. Ndakatenderwa zvinhu zvose; asi zvose hazvisimbisi. 24 Munhu ngaarege kuzvitsvakira zvake, asi zvomumwe. 25 Idyai zvose zvinotengwa panotengeswa nyama, musingabvunzi chinhu nokuda kwehana; 26 nokuti nyika ndeyaShe nokuzara kwayo. 27 Kana mumwe wavasingatendi akakukokerai kuzodya, kana mukada kuenda, idyai zvose zvinoiswa pamberi penyu, musingabvunzi chinhu nokuda kwehana. 28 Asi kana mumwe akati kwamuri: Ichi chakabayirwa zvifananidzo, regai kudya nokuda kwaiye wakakuratidzai, vuye nokuda kwehana; 29 handirevi hana yako, asi yomumwe;nokuti kusununguka kwangu kunotongerweiko nehana yomumwe? 30 Kana ini ndichidya ndichivonga, ndingagotukirweiko nokuda kwechinhu chandinovonga pamusoro pacho? 31 Naizvozvo, kana muchidya, kana muchinwa, kana muchiita chinhu chipi nechipi, itai zvose kuti Mwari akudzwe. 32 Regai kugumbusa kana vaJudha, kana vaGiriki, kana kereke yaMwari. 33 Seni vo ndinofadza vanhu vose pazvinhu zvose, ndisingatsvaki zvingandibatsira ini, asi zvingabatsira vazhinji, kuti vaponeswe.